China Steel Frame Scaffolding With Heavy Duty fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Simbi furemu scaffolding ndeimwe yeanonyanya kushandiswa scaffolding muzvivakwa.Nekuti furemu huru ndeye "gonhi"-yakaumbwa, inonzi portal kana portal scaffold, inonziwo gondo kana gantry.Iyi scaffold inonyanya kuumbwa nefuremu huru, transverse furemu, cross brace, scaffold board uye inogadziriswa base.
1.Material: sezvinodiwa nemutengi
2.Packing: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
3.Surface treatment: galvanized, painted kana sezvinodiwa nemutengi
4.Size: maererano nezvinodiwa nemutengi
STD/ Ledger(PG)mm Saizi (mm) KG STD/ Ledger(HDG)mm Saizi (mm) KG
2.Raw material upgrade
3.Hot-dip galvanizing process
5.Kutakura kukuru kwekutakura
6.Low dosage uye light weight
7.Fast musangano, kushandiswa nyore, kuchengetedza mari
1. Steel frame scaffolding inoshandiswa kutsigira kumusoro muchimiro chezvivakwa, horo, mabhiriji, viaducts, tunnels, nezvimwewo kana seyakanyanya furemu yekutsigira kubhururuka fomu.
2. Steel frame scaffolding inogona kushandiswa mukati uye kunze kwemutsara mitsara yezvivakwa zvepamusoro.
3. Active working platform for electromechanical installation, hull repair uye mamwe mapurojekiti ekushongedza.
4. Imba yekurara, imba yekuchengetera kana bhawa yevashandi venguva pfupi inogona kuumbwa nekushandisa portal scaffolding ine nyore denga truss.
5. Simbi furemu scaffolding inogona kushandiswa kumisa yenguva yekuona chikuva uye zvimire.